maxaa ka cusub Burdheere - Muqdisho Online
Home Home maxaa ka cusub Burdheere
Wararka aan ka heleyno deegaanka Burdheere ee hoostaga degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xaalada deegaankaas saakay ay degan tahay ,kadib markii shalay dagaal xoogan uu ka dhacay.
Deegaanka Burdheere ayaa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay laba maleeshiyo beeleed oo wallaalo ah,kaasi oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay.
Ugu yaraan 30 ruux ayaa oo labada dhinac ah ayaa ku geeriyootay dagaalkaas,halka tiro ka badana ay ku dhaawacmeen,sida dadka deegaanka ay sheegeen,waxaana weli jirta cabsi xoogan.
Maleeshiyaadka dagaalamay ayaa isku heysta dhul daaqsimeed ku yaalla halkaasi,waxaana dhowr jeer oo horey dhexmaray dagaalo geystay Khasaarooyin kala duwan.
Waxgaradka deegaanka ayaa ku baaq in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Burdheere ee hoostaga degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe,
Dhinaca kale Madaxda maamulka Hirshabeelle ayaa baaq nabadeed u diray beelaha wallaalaha ah ee dagaalamaya,iyagoona ka codsaday in la joojiyo dagaalkaas.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya goobihii shalay dagaalku ka dhacay ayaa waxa ay sheegayaan in haatan xaalada ay tahay mid degan ,mana jirto wax rasaas ah oo laga maqlayo,hayeeshee Maleeshiyaadkii dagaalamay ay weli ishor-fadhiyaan.
Previous articleWasiirka Arrimaha dibada Eriteriya oo ku wajahan Somaliland
Next articleCabdullaahi Xuseen Cusmaan oo laga qaaday xilka maareeyaha Garoonka Diyaaradaha Baraawe